उत्पादन व्यवस्थापनको ad घातक गल्तीहरू Martech Zone
आइतबार, अक्टोबर 22, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
म अन्तिम दुई हप्ता को लागी दिन र रात काम गर्दैछु। यो अत्यन्त कष्टकर भएको छ, विशेष गरी जबदेखि मसँग धेरै प्रोजेक्टहरू छन् जुन मसँग काम गर्न प्रतिबद्ध थिए। म थाकेको छु ... यस हप्ताको एक रात म घर आई र ओछ्यानमा गएँ र १२ घण्टा पछि ब्यूँझें। म निश्चित छु कि मैले चिसो पक्रेको छु र मेरो शरीरले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो किनभने मँच्छुँ फुच्ने समय थिएन। कामका मुद्दाहरू वास्तवमै जटिल छैनन्, हामीले केवल हाम्रा ग्राहकहरूलाई ध्यान दिएनौं।
यो एक साधारण समाधान जस्तो देखिन्छ, तर किन मानिसहरू यो सबै समयलाई वेवास्ता गर्छन्? मलाई लाग्छ त्यहाँ धेरै कारणहरू छन्:
तपाई जनतालाई ध्यान दिनुहुन्न, तपाई ठूलो स्वरमा ध्यान दिनुहुन्छ। यसले तपाईंको फैसले फैलाउने परिवर्तनलाई समाहित गर्न प्रभाव पार्न सक्छ जुन जनता द्वारा आवश्यक वा न त आवश्यक नै छ। यहाँ खतरा यो हो कि तपाईले भनेको छु, "मैले ग्राहकलाई सुनें"। समस्या यो हो कि तपाईंले ग्राहकको कुरा सुन्नु भएनS.
तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ, सबै ईमानदारीमा, कि तपाइँ एक योजना कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ जुन ग्राहकको लागि राम्रो हो। तपाईंको आशय राम्रो छ। तपाईंको मुटु सहि ठाउँमा थियो। समस्या यो हो कि तपाईंले उनीहरूसँग पहिले जाँच गर्नुभएन। सत्य यो छ कि तपाईं हुनेछ कहिल्यै पूर्ण रूपमा ग्राहकहरूले तपाइँको उत्पादनलाई के गरिरहेका छन् बुझ्नुहोस् - विशेष गरी जब तपाइँको आधार आकारमा तीव्रताका साथ बढ्दछ।
तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ। केहि कारणका लागि, तपाईले आफ्नो अधिकारको स्थितिलाई प्रदान गरिएको फिल्डमा तपाईको विशेषज्ञताको स्वीकृतिका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। त्यसोभए तपाईलाई लाग्छ ग्राहकलाई के चाहिन्छ र के चाहान्छ भनेर।
तपाईं समस्यामा फोकस गर्नुहुन्न, तपाईं फोकस गर्नुहुन्छ केही समस्या के थियो भनेर पूर्ण रूपमा परिभाषित नगरी समाधान। वा, तपाईंले समस्याको साइट हराउनुहुन्छ किनकि तपाईंले समाधानको विस्तार गर्न जारी राख्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु को लागी लड्न छैन। तपाईं समाधान निर्माण र अविश्वसनीय प्रतिभाशाली विकासकर्ताहरू र पेशेवरहरूको समूहको आधारमा एकीकृत गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। तिनीहरूले तपाईंको निर्णयलाई नियन्त्रणमा राख्छन् ... र उनीहरूले के सुझाव दिन्छन् त्यसले वास्तविक अर्थमा बनाउँदछ। समस्या यो हो कि यसले आन्तरिक अर्थ राख्छ, तर ग्राहकलाई होइन।
फेरी यी, बेवास्ता गर्न धेरै सजीलो गल्ती देखिन्छ। यद्यपि, बृहत कामदारहरू र शानदार समाधानहरूको साथ कम्पनीको दिनहुँ हडल, यो ग्राहकको साइट गुमाउन एकदम सजिलो छ। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, दुखाइ छिटो र धेरै असहज हुनेछ।
केटाहरू र खेलौनाहरू!
उत्कृष्ट पोष्ट डग - तपाईले यसलाई राम्ररी वर्णन गर्नुभयो।
# १ एक चीज हो जुन सधैं मेरो लागि लड्न गाह्रो हुन्छ। विशेष गरी मेरा अनुप्रयोगहरू जस्तै फार्मस्प्रि and र पोनीफिशसँग, जहाँ मसँग विभिन्न ग्राहकहरू छन् जो चुपचाप एउटा सुविधाको काम गर्ने तरीका मन पराउँछन्, तर धेरै चर्को प्रयोगकर्ताले मलाई यसलाई परिवर्तन गर्न मनाउँछ।
अवश्य पनि, म यसलाई कस्टम विकास प्रोजेक्टहरूमा पनि अक्सर देख्छु जहाँ प्रबन्धक चर्को आवाजले X लाई Y बन्न चाहान्छ, तर "वास्तविक" प्रयोगकर्ताहरू जसले प्रबन्धकको लागि काम गर्छन् उनीहरू असहमतिमा चिच्याउन चाहन्छन्।